Abavelisi be-china excavator ripper kunye nabathengisi | UMCINI
Isiphelo sangaphambi kwesikratshi senziwe ngezinto ezinxibe kakhulu ukwenza isixhobo setyhula esahlukileyo sokhuselo, esinokuzahlula ngokulula umhlaba kunye nelitye kwaye sinciphise ukusikwa. Inokuwukhulula umhlaba onzima, ilitye elinomkhenkce, ilitye eligugileyo kunye nelitye eliqhekekileyo.
Izixhobo eziphambili zeRipper:1). Nxiba intsimbi enganyangekiyo isetyenziselwa ukwandisa ukomelela kwe-ripper;2). Bonke ubungakanani besiripper bufumaneka ngokuxhomekeke kwimodeli yokumba;3). Inkonzo yesiqhelo iyafumaneka, izinyo elinye kunye namazinyo aphindwe kabini;4). Iwaranti iinyanga ezili-12; 5) izikhonkwane eziphathwayo.6) Itekhnoloji yokuwelda elungileyo.Imishini yethu yile: Umgangatho wokuqala, eyona nkonzo iphambili kunye neyona nto ibalulekileyo. Ukuzibophelela okungagungqiyo kumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yokucinga kusizuzela igama elihle kunye namaqabane ezayo. Kwaye siya kuhlala siphucula iimveliso ukuze sikhonze ngcono kwimarike zehlabathi. Sijonge ukusebenza nawe!
Amandla okubonelela:Iiseti ezingama-800 / iiseti ngenyanga nganye Ukupakisha kunye nokuhanjiswaIinkcukacha Packaging Iimeko Export Wooden okanye isicelo loMthengi Iinkcukacha zokuhanjiswa: Ukuthunyelwa ngeentsuku ezi-3-7 emva kokuhlawulwa excavator umsebenzi onzima Ripper
Uhlobo lwephakheji:1. ukuthumela ngaphandle ulwandle iphakheji esemgangathweni, eneplanga okanye ipallet yentsimbi, ibhokisi yomthi, ifreyim yesinyithi njl.2. enye ye-20GP inokulayisha malunga ne-12-14 iziqwenga ze-1.0m3 okanye i-1.2m3 iibhakethi ze-Doosan excavator ripper;3. enye i-40HC ingalayisha malunga nama-26-28 amaqhekeza e-1.0m3 okanye i-1.2m3 yeebhakethi zeDoan excavator ripper;4. iphakheji elungiselelwe wena yeDoan excavator ripper.
IzibukoLianyungang, Shanghai okanye QingdaIxesha lokukhokhela :
Est. Ixesha (iintsuku) 2 Kuya kuthethathethwana
Besisoloko sijonga uMgangatho weMveliso njengoMphefumlo wenkampani, unamathela kumgaqo weNkonzo, uPhuculo kunye noPhuhliso oluZinzileyo lokuba luphawu oluphezulu kushishino lobunjineli. Iya kukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha ekumgangatho ophezulu, eyona mveliso ikumgangatho ophezulu kunye noluhlu olubanzi lwezincedisi zonikezelo kunye neenkonzo zobuchwephesha emva kwenkonzo.
1. Amandla eMinyan:Singumzi-mveliso, sinesebe lethu leMinyan ukwenza uphuculo lobuchwephesha. Siyila iimveliso ezifanelekileyo ngobuchwephesha bethu.Inkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo:Iqela QC yobungcali kunye noomatshini phambili ukuqinisekisa umgangatho iimveliso zethu ezigqwesileyo.3. Intanda-bulumkoUkunikezela ngeenkonzo ezilungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo kubaxhasi bethu ifilosofi yethu yanaphakade.4.Raw izintoingqokelela: Ubudlelwane bentsebenziswano bexesha elide bugcinwa nabathengisi abafanelekileyo bezinto ezisetyenzisiweyo, eziqinisekisa umgangatho ophezulu wethuiimveliso ezivela kwinyathelo lokuqala.5.Inkxaso yoomatshini abaphambili:Uthotho koomatshini kwamanye amazwe ezisetyenziswa ngokubanzi ngexesha imveliso yethu. Le yimfuneko yehardware eyimfuneko yomzi mveliso ophuhlisiweyo.6.Steady abaza kuzisebenzisa unikezelo: Sivelisa zonke iibhakethi ze-excavator, ke inkqubo ethembekileyo yokubonelela ngezixhobo imiselwe.7. Ukhetho olwahlukeneyo lweentlobo ezahlukeneyo zokumba:Izimbiwa ezisebenzayo zivela kwi-0.8ton ukuya kwi-55ton. Ukuqhekeka kwethu kunokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zesikhuseli.Amava okuthumela ngaphandle:Iqela elithengisa ngobuchule likhuthaza abahluli bethu kumazwe angama-50 ngaphezulu emhlabeni.
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda unxibelelane nam.
Ndikhangele phambili ekubeni liqabane lakho lexesha elide.
Ukusetyenziswa kwesixhobo sokucoca amanziUkukrazula umhlaba onzima onjengomhlaba onamatye kunye namatye, itundra njl.Ilungele iintlobo ezininzi zebrendi kunye nemodeli yesikhombi: EKOMATSU, KOBELCO, HITACHI, KATO, SUMITOMO, CAT, HYUNDAI, DAEWOO, CASE, DOOSAN, VOLVO, JCB, JHON DEERE, KUBOTA, LIEBHERR, SANY, njl.
Inkonzo yethuIinkonzo ze-1 zangaphambi kokuthengisa: a: Yila iprojekthi elungelelanisiweyo yabathengi.b: Uyilo kunye nokuvelisa iimveliso ngokweemfuno zabathengi ezizodwa.c: Qeqesha abasebenzi bobuchwephesha kubathengi.2. Iinkonzo ngexesha lentengiso:a: Nceda abathengi ukuba bafumane abathumeli bempahla abafanelekileyophambi kokuba kuhanjiswe.b: Nceda abathengi benze izicwangciso zokusombulula.3. Iinkonzo zasemva kokuthengisa:a: Ukunceda abathengi ukulungiselela iskimu sokwakha.b: Faka kunye nokulungisa izixhobo.c: Qeqesha abaqhubi be-lin yokuqala.d: Vavanya izixhoboInkonzo yasemva kokuthengisa: iiyure ezingama-24 zenkonzo yenkxaso yobuchwephesha ekwi-intanethi iyafumaneka;Inkonzo esingabizi: imveliso elungelelanisiweyo ngokweemfuno zabathengi;Isiqinisekiso: iinyanga ezili-12 iwaranti emva kokufumana imveliso.
Isincamathelisi sokukhupha isixhobo sokushicilela esitsha se-DH500 esithengiswayo1. excavator ripper imodeli no.: Doosan DH5002. excavator ripper izinto: Q345B + NM400 okanye wena3. excavator ripper unit unit: malunga 920kg4.Rippers Elungiselelweyo ezizodwa zethu5. Iimarike zethu eziphambili yi-Ecuador, iMelika, iPanama, iRashiya, i-Australia, i-zeland entsha, iThailand, iSingapore njl 6.Isixhobo esitsha se-DH500 iDoosan excavator ripper attachment yentengiso eyenziwe e-China
Excavator ripper imodeli no. IDoosan DH500
excavator ripper igama Isincamathelisi sokukhupha isixhobo sokushicilela esitsha se-DH500 esithengiswayo
Izinto zokucoca isixhobo sokumba Q345B + NM400 okanye wena
Umbala wokurhabaxa wokumba orenji okanye wena
ubunzima excavator ripper unit malunga ne-920kg
Excavator ripper amazinyo inxenye akukho. I-D90 (4T5502)
excavator ripper icala umkhuseli inxenye no. Qhuba
ubungakanani bephakheji yokumba malunga ne-2.2m3
Excavator ripper package pallet ngomthi
Imvelaphi yokuvuthwa kwesikhombi yenziwe etshayina
Isikhonkwane sokukhuphaA: Izinyo elinomthwalo onzimaZifakele izinyo elinomthwalo onzima ukuqinisekisa ezona ziphumo zibalaseleyo kwaye zinxibe ukuxhathisa; B: Umkhuseli wempumloRansun ripper yongeza ibhloko ukukhusela isikhuseli ukuthintela ukwaphuka, kwaphuke.C: Nxiba izinto ezinganyangekiyo zepleyiti ye-NM400 esetyenziswe kule plate ukuqinisekisa I-lifeD usebenzisa i-lifeD
Iifayile ze-D11 9W4551
I-Minyan Bucket ngumzi-mveliso onamava ngakumbi okwenza uncamathiselo lwe-Excavator, sibe neqela lethu lobunjineli, iqela lokuthengisa, ukupakisha kunye nokulayisha iqela, kunye nabasebenzi abangama-80 ukuhlawula ingqalelo eyi-100% ekwakheni iimveliso ezikumgangatho ophezulu eziyi-100%
Inkampani yethu: XUZHOU MINYAN Import & EXPORT CO., LTD
Indawo yethu: Xuzhou Jiangsu kwiphondo, isiseko sokwakha oomatshini esikhulu China.
Iimveliso zethu: IBHAKI ELIKHULULEKILEYO LOKUGQIBELA, ISICWANGCISO SOKUGQIBELA ISIKHUMBUZO, ISICWANGCISO SESIVIVINYO SEBHAKETHE, AMAZINYO EBHAKI, ISIPHUMELELO SOKUQHUBA, ISIKHUMBUZI ESIKHULULEKILEYO, iimveliso zethu zifanelekile kuzo zonke iintlobo zeemodeli zokumba. Njenge-CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
Indawo esihlala kuyo kubathengi: iOstreliya, iMelika, iCanada, iPanama, iBrazil, iPeru, iEcuador, iUruguay, iParaguay, iRashiya, Sweden, Norway, Chile, France, Algeria, Angola, South Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines njalo njalo.
Asikaze siyeke ukuphucula, sifuna ukuba yeyona nto ibalaseleyo kolu shishino, ukuze ube ngumenzi we-Excavator Bucket omthembileyo.
Egqithileyo excavator isefu emele
Okulandelayo: excavator womeleze umhlaba emele